Uumanii Oromoo hoji malee Olola hin baarbaaduu!!!
ABO qabsoo Hidhanno dhisee Paltakn WFDO fi OPC irrati dula banun Maliif?
ABO dabbalee isaa siirnan kan hin leenifnee, fareen QBO amatee jira. Qabsoon Oromoo gara isheen iitideemtuu walalee, diina dhisee takkan WFDO, OBK, QC, Jijirama, OPDO fi ODF jeechuun olola irratii deemsisuu dhaabuu banan bala guddati seenuun isaa hin oluu. ABO qabsoo wagga 40 gegese rakko of qabuu keessa ba’uuf caaraquu dhisee kara dabbalee isaa biyya ala teese qabsoo gurgurtuu Oromoo biyya keessa diina dura dhabacha jiran irrati olola guyya guyya gegesuu atataman dhabuu qaba. Dabbalee ABO biyya ala jiran gutuman gututii ABO kan diigan ta’uu isaa sadarakan ABOn hara irra jiruu ragga gudadha. Uumaani Oromoo ABO rakko isaa keessa jiruu fi diini hanga samuuti isaa keessa lixee isaa facassa jiruu of qeequu dhisee nama hundan OPDO jeedhee balaleefatuu irra of xiqeesuu qaba.
Kana booda ABO diina isaa irrati dula jira Ginboti 7 fi TPLF dhisee mana keessa deebiyee ijoolee Oromoo fi Dhaabilee Oromoo irrati yaakaa dalaguu dhabuu banan of irra ittisuuf dirqama keenya. Hanga ABO ejjennoo isaa hin jijiree fi dabbaloon isaa biyya USA fi Europa jiran kun dhaabilee oromoo irra of hin qusaneet dargagoon Oromoo dhaabba kana irra of qusachuu qaban. Qabsoo wagga 40 gegesine maliif bakkan ga’uu dhabne jeedhee of qeequu mana siyyssa rakasha Hawwassa Oromoo diiguu gegesuu dhabuu qabuu.
Nu Ilmaani Oromoo hojiin keenya ABO diigu utuu hin tanee ABOn Kalachaa Qabsoo Oromooti yamuu jeene dhagga ABO irrati darbatamuu qolachaa jiru ABOn hoji dhisee Oromoo qulquluu fi QBO haqan degeran irrati duluun nu gadisisee jira. ABOn kabaja uumataa Oromoo birra qabuu ofuma isaati baleesuu hin qabuu. Garuu ABO uumataa isaa dhageefachaa hin jiruu.
QBO ijoolee isaan bakka ni ga’aa !!!